Lalao famoronana Candy - Free Lives Tips Cheats Soso-kevitra - Candy Crush Saga Free Downloads Help Cheats
Lalao famoronana Candy - Free Lives Tips Cheats Soso-kevitra
Eto ianao: an-trano / an-trano
Ahoana no handrefesanao ny fahombiazana eo amin'izao tontolo izao ankehitriny? tsara, tranga tsotra ny fahombiazan'ny olona raha mahavita asa sarotra nefa tsy manahy. Hiatrika toe-javatra maro ianao izay manana fahasarotana. Milavo lefona fotsiny ve ianao? Raha manao izany ianao, dia tsy afaka mahatsapa ny hamamin'ny fahombiazana ianao. Eto no lalao ny […]
Ny ambaratonga fahasarotana Candy dia zava-tsarotra tsy ny rehetra no mifaly. Fa ho an'izay manao izany, azontsika antoka fa be ny ambaratonga izay ahafahan'izy ireo manana izany fahafinaretana izany. Na dia misy rivo-piainana henjana sy henjana manodidina ny ambaratonga miaraka aminy amin'ny fiantsoana sy akora tsy nahy, manindrona ny Smartphone ary manadihady izany aoriana kely […]
Manontany tena ve ianao hoe hatraiza ny halalin'ny ranomasina? Manao ahoana ny haben'ny vahindanitra misy antsika? Tena midadasika izao rehetra izao? Ny haavon'ny Candy Crush Saga dia hisy? Ny tiako hambara, tsy mbola nandalovan'izy rehetra izany; raha ny tena izy, ny ankamaroantsika dia mihemotra lavitra ny toko ankehitriny. Amin'ny lafiny tsara, […]
Tsy hidina atsy ho atsy ny tazo Candy Crush, ary rehefa miakatra hatrany amin'ny ambaratonga ambony ny olona, tsy mitsaha-mitombo ny hafanam-pon'izy ireo. Loko masiaka nefa amin'ny fomba mahafinaritra. Ampahany amin'ny lalao ny ambaratonga sarotra, noho izany dia namolavola ity ampahany ity izahay mba hanomezana anao ny haavon'ny Candy Crush 1442 Cheats and Tips! Iray […]
Matetika izahay miresaka momba ny fahasambarana fa mba manontany tena ve ianao hoe inona ny dikan'izany ? Midika fotsiny izany fa manadio vato misakana iray ianao dia voahitsinao izany. Amin'ny tranga vatomamy, ny fahasambaran'ny mpampiasa dia afaka manadio sehatra iray izay manelingelina azy ireo. Betsaka ny mpilalao no mimenomenona, rehefa tafahitsoka amin'ny a […]
Tezitra ve ianao amin'ny hoe mijanona eo amin'ilay toerana nisy anao? Tsapanao ve fa tsy manana tanjona ny fiainanao raha tsy tratra io tanjona io? ENY, maro amin'ny olona eo amin'ny fiainana no manana fihetseham-po mitovy raha toa ka mijanona amin'ny ambaratonga iray amin'ny lalao iray. Noho izany, mahita fahasambarana nefa tsy manadio a […]
Misy olona tia fanamby eto amin'ity tontolo ity. Mahatsapa izy ireo fa ny tsara indrindra avy amin'izy ireo ao anatin'ny tontolo sarotra. Tsy maintsy mitady fomba ahafahany mamaha sehatra sarotra izy ireo. Na izany aza, indraindray ny mpampiasa dia mijanona. Azo antoka, izao no fotoana ilanao torolàlana kely avy amin'ny toerana rehetra […]
Mahatsapa ve ianao fa kely kokoa ny lokon'ny fiainanao?? Ilaina ve ny manampy loko amin'ny fiainanao? Ka raha tsapanao izany dia voalohany angamba ianao mbola tsy nilalao bonbon vatomamy. Ity dia lalao vatomamy miloko. Ny sasany amin'izy ireo dia soratana, ny sasany fonosina ary ny sasany ihany […]
Amin'izao tontolo izao mikorontana, mila mitady fotoana ho an'ny tenantsika fotsiny isika, fotoana izay mahatonga ny fiainana ho mendrika ny hiainana, fotoana izay manampy antsika hitoetra ho salama tsara ao anatin'ity blur be atao antsoina hoe fiainana ity. koa, tsy maintsy tonga miaraka amin'ny fandosirana mora indrindra ho anao avy amin'ny saga Candy Crush Jelly izahay. Momba ny Journey Candy Crush […]
Candy Crush namana
Mbola mino ve ianao fa misy olona sasany manomana lalao video irery? Tena toy izao aho? Miaina amin'ny taonjato faha-19 ve ianareo sa ahoana? Nahoana isika no tsy tokony hifandray amin’ny namantsika raha mifandray avokoa ny zava-drehetra eto amin’izao tontolo izao ankehitriny? Moa ve isika manana fotoana hiarahana amin'izy ireo amin'ny fotoana rehetra? Tsy dia izany loatra, […]
Nohavaozina farany tamin'ny Jolay 16, 2021 ny Isobella Franks Mametraha hevitra
Nohavaozina farany tamin'ny Aogositra 10, 2021 ny Isobella Franks Mametraha hevitra
Nohavaozina farany tamin'ny Aogositra 4, 2021 ny Isobella Franks Mametraha hevitra
Nohavaozina farany tamin'ny Novambra 11, 2021 ny Isobella Franks Mametraha hevitra
Vaovao Candy Crush
nahazoan-dalana | politika fiarovana fiainan'olona | Zo rehetra voatokana © Copyright Candy-Crush.co
Candy-Crush.co dia tranonkala mpankafy ny Candy Crush. Candy Crush Saga dia marika voasoratra anarana an'ny King.com Corporation ary ity tranokala ity dia tsy misy ifandraisany amin'ny King.com.Ny marika rehetra dia fananan'ny tompony tsirairay avy.. Zo rehetra voatokana.
Mampiasa cookies ity tranokala ity hanatsarana ny traikefanao. Heverintsika fa mety ianao amin'ity, fa afaka misafidy ianao raha tianao.MANAIKY Hamaky bebe kokoa
Tena ilaina tokoa ny cookies ilaina mba hahafahan'ny tranokala miasa tsara. Ity sokajy ity dia tsy misy afa-tsy cookies izay miantoka ny fiasa fototra sy ny fiarovana ny tranokala. Ireo cookies ireo dia tsy mitahiry fampahalalana manokana.
Izay cookies izay mety tsy tena ilaina amin'ny fiasan'ny tranokala ary ampiasaina manokana hanangonana angon-drakitra manokana amin'ny alàlan'ny analytics, dokam-barotra, ny atiny hafa tafiditra dia antsoina hoe cookies tsy ilaina. Tsy maintsy atao ny maka ny faneken'ny mpampiasa alohan'ny hampandehanana ireo cookies ireo amin'ny tranokalanao.